सपना साकार गर्न प्रकाशक र साहित्यकार बनें : यमुना | NepalDut
सपना साकार गर्न प्रकाशक र साहित्यकार बनें : यमुना
श्रावण ५ गते २०७६
पुस्तक प्रकाशन गर्नु आफैंमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यो चुनौतिलाई स्वीकार्न तयार भएकी छिन् यमुना पराजुली अधिकारी । उनी नेपालका औंलामा गन्न सकिने महिला प्रकाशकमध्ये एक हुन् । इटरनल पब्लिकेसनको नामले उनले पुस्तक प्रकाशित गरिरहेकी छिन् । जुनसुकै काम पहिलो पटक गर्न गाह्रो हुन्छ तर पछ्याउन सजिलो । जोखिमस“ग जुधेर अरुलाई पछयाउन सजिलो बनाएकी छिन् यमुना । ३६ वर्षको उमेरमा यात्रा गरिरहेकी उनी चुनौतिले भरिएको काम गर्न मन पराउ“छिन् । उनी प्रकाशकमात्र नभएर लेखक पनि हुन् । प्रस्तुत छ यमुनासँग बालिका थपलियाले गरेको कुराकानी :
इटरनल पब्लिकेसन कहिले सुरुवात भयो?
डेढ वर्ष भयो ।
नेपालमा महिला प्रकाशक कम छन् । तपाई प्रकाशक बन्नको लागि कसरी प्रेरित हुनुभयो?
म आफू पनि लेखक हुँ । राम्रो लेखाईले समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि टेवा पु¥याउ“छ भन्ने विश्वास छ । जीवनमा केही न केही उल्लेख्य काम गरेर योगदान दिने मेरो बाल्यकालदेखिकै सपना थियो । त्यो सपनालाई म प्रकाशक भएर साकार पार्न चाहान्छु ।
प्रकाशक बन्दाका कठिनाइ के के छन् भन्ने लाग्छ तपाइलाई ?
जुनसुकै काम सफल पार्नका लागि कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ । म प्रकाशकमात्र नभएर कसैकी श्रीमती र २ सन्तानकी आमा पनि हुुँ । घरका सदस्यको हेरविचार गर्ने, घरको कामकाज पनि गर्ने मेरो कर्तव्य हो । घर व्यवहारसहित जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज त छैन, तैपनि मैले हिम्मत हारेकी छैन् । “म प्रकाशक हू“” भन्दा अझ पनि धेरै मानिसले पत्याउ“दैनन् । कसैले “एक्लै काम गर्नुहुन्छ ? कुनै पुरुषको साथ छैन् ? तपाई यो काममा सफल बन्न सक्नुहुन्न,” भनेर प्रश्न अनि अनुमान गर्छन् । तर मलाई यस्ता प्रश्नले हतोत्साहित बनाउनुको साटो ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।
तपाई आफू पनि लेखक हो । कुन कुन विधाका पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ ?
मैले जलसा गजलसङग्रह, पातको श्रीपेच, तिल्के सुगा, फूलका गहना बाल कथा संग्रह, सबलको सपना भन्ने बाल चित्रकथा प्रकाशित गरेकी छु । अब बाल उपन्यासको तयार गरिरहेकी छु । मलाई विशेषगरी बालबालिकाको बारेमा लेख्न मन लाग्छ । बाल्यावस्थादेखि नै पुस्तक पढ्ने बानीको विकास हु“दा बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता बढ्ने भएकाले बाल साहित्यप्रति मेरो ध्यान गएको हो ।
“म प्रकाशक हू“” भन्दा अझ पनि धेरै मानिसले पत्याउ“दैनन् । कसैले “एक्लै काम गर्नुहुन्छ ? कुनै पुरुषको साथ छैन् ? तपाई यो काममा सफल बन्न सक्नुहुन्न,” भनेर प्रश्न अनि अनुमान गर्छन् ।
तपाईको प्रकाशनबाट कुन कुन विधाका पुस्तक प्रकाशित भएका छन् ?
मैले जम्माजम्मी ४ वटा किताब प्रकाशन गरेकी छु । पत्रकार दामोदर न्यौपानले लेख्नुभएको ‘स्वर्णीम् समय’ ५१ जना व्यक्तिको बाल्यकालको कथा हो । लक्ष्मण तिवारीले लेख्नुभएको ‘पाहुनाघर’ उपन्यास हो । पत्रकार श्रीष भण्डारीले लेख्नुभएको किताब ‘अठोट’ बजारमा आएको छ । यो बालबालिकास“ग सम्बन्धित लेखको सङग्रह हो । पछिल्लो पटक बजारमा आएको डा. उत्तम खनालद्धारा लिखित ‘प्रणयकोष’ कविता सङ्ग्रह हो ।
समाजलाई तपाई आफनो परिचय कसरी दिन चाहानुहुन्छ ?
लेखन र प्रकाशन मेरा रुचिका विषय हुन् । त्यसैले म लेखक र प्रकाशकको रुपमा समाजमा स्थापित हुन चाहन्छु ।
प्रकाशक भएका नाताले पाठकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
गुणस्तरीय किताब पढौं । किताबको यात्रा ज्ञानमूलक हुन्छ । कस्ता खालका किताब प्रकाशन गर्दा पाठकलाई मन पर्छ ? त्यसको बारेमा हामी प्रकाशकले पृष्ठपोषण पाए उत्कृष्ट किताब प्रकाशन गर्नका लागि पृष्ठपोषण मिल्ने थियो । प्रकाशकमुखी नभई राम्रा किताब जुन प्रकाशनबाट प्रकाशित भए पनि अध्ययन गरौं भन्न चाहन्छु ।